Apple Inosunungura Chechishanu iOS 10.3.3 Developer Beta | IPhone nhau
Nepo isu tese tiri neiyo iOS 11 yeruzhinji beta bvunzo, Apple ichangoburitsa maminetsi mashoma apfuura iyo yechishanu beta vhezheni yeIOS 10.3.3 yevagadziri. Idzi nyowani beta vhezheni yeIOS 10.3.3 inowedzera pamusoro pese kuvandudzwa mukuita uye kururamisa kwemamwe mabugs kubva kune yapfuura beta.
Apple inoenderera nemugwagwa wayo uye haina kuburitsa mukuvhurwa kweiyi beta vhezheni vhiki nevhiki uye ikozvino vhezheni yechishanu yeiyi beta yevagadziri inosvika mushure memazuva matanhatu. Mune ino kesi, iko kuvandudzwa kunoitwa kunoteera mutsara mumwechete senge vhiki rega rega uye kana paine chero nhau dzakasarudzika dzinoonekwa isu tichagadzirisa chinyorwa ichi zvakananga, asi zvinoita sekunge izvi hazvisi izvo.
Iyo vhezheni iri kuwedzera nekukura uye kupenya, izvo zvaisazotishamisa izvozvo vhezheni yekupedzisira yeiyi iOS 10.3.3 ichaburitswa munguva pfupi inotevera izvo zvakaenda zvisingaonekwe maererano neyakagadziriswa maficha. Muchikamu isu tese tanga takamirira iOS 11 uye yeruzhinji beta uye iyi vhezheni yave iri kumashure. Iyo yeruzhinji beta yeiyi iOS 11 yaunza kune vanoverengeka vashandisi mamwe emusoro ekuwedzera ekuda kuyedza vhezheni itsva uye zvinoita sekunge Apple yaomesa kudzoka kweshanduro yapfuura zvishoma.
Isu tiri pachena kuti shanduro dzevagadziri vakaita seiyi beta 5 dzinofanirwa kunge dziri dzavo uye kwete kune vashandisi vanoda kuyedza, asi zvakare isu tinorangarira kuti zvakanakisa kugara kunze kweizvi uye kumirira izvo zviri pamutemo vhezheni apo Apple painoburitsa ivo kuti vadzivise matambudziko ekuenderana kana mabugs anowanzo kuve nawo. Mune ino kesi, semabheas evakambogadzira vagadziri, ivo vatove nekutora kuripo kuti vawane matambudziko anogona uye nekutaurirana navo kuvakomana kubva kuCupertino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Apple Inosunungura Chechishanu iOS 10.3.3 Mushambadzi Beta
8x38 Podcast: Zviratidzo zveApple's New Software